ASUS ROG Taleefanka 2: Qiimaha iyo helitaanka Yurub | Androidsis
ASUS ROG Telefoonka 2 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Yurub
Eder Ferreno | | Aaladaha Android, Mobiles
Telefoonada casriga ah ee ciyaaraha ayaa sii wadaya helitaanka joogitaanka suuqa. Waxaa jira noocyo dhowr ah oo horay nooga tagay jiilal dhowr ah, sida ASUS. Soo-saaraha ayaa soo bandhigay xagaagan ASUS ROG Telefoonka 2 si rasmi ah, jiilka labaad ee taleefankaaga ciyaaraha. Moodel awood badan, oo dad badani u arkeen inuu yahay taleefanka ugu fiican ee aan ka heli karno qaybtan suuqan.
Asus ROG Phone 2 waa taleefan abuuraya xiisaha, Shiinaha kaydadkoodu aad bay u guuleysteen, iyo ugu dambeyn waxaan horey u ognahay goorta ay imaaneyso Yurub, oo ay ku jirto Spain, si rasmi ah. Markaa kuwa xiiseynaya taleefankan ciyaaraha waxay awoodi doonaan inay iibsadaan moodeelkan horayba.
Shirkadda ayaa ugu dambayntii shaaca ka qaadday faahfaahinta suuq-geynteeda ay soo bandhigtay, taas oo in badan oo ka mid ahi ay muddo dheer sugayeen sida ay ahayd sug xoogaa xagaagan inaad waxbadan ka ogaato arintan. Laakiin waxaan horeyba u ogaanay goorta aan awoodi doonno inaan soo iibsanno taleefankan nooca ah guud ahaan Yurub, oo ay ku jiraan suuqyada sida Spain. Marka hore, waxaan kaaga tagi doonaa qeexitaankiisa si aad u xasuusato waxa taleefankani leeyahay.
1 Qeexitaannada ASUS ROG Telefoonka 2
2 Qiimaha iyo bilowga
Qeexitaannada ASUS ROG Telefoonka 2
ASUS ROG Telefoonka 2 waa mid ka mid ah taleefannada ugu awoodda badan in aan suuqa ku jirno. Marka waa qaab ku habboon in la ciyaaro. Naqshadeedu waxay ku habboon tahay qalab noocan ah, iyo sidoo kale astaamaha farsamo ahaan. Laga soo bilaabo xulashada processor-ka, shaashadda oo leh heerka dib-u-cusbooneysiinta, batterigeeda weyn ama nidaamka qaboojinta ayaa jooga. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Shaashadda: 6.6-inch AMOLED oo leh Go'aan: 2340 x 1080 pixels, heerka cusbooneysiinta 120 Hz iyo saamiga 19: 9
GacaliyeQalabka: Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Kaydinta Gudaha: 512 GB
Kaamirada gadaal: 48 MP + 13 MP xagal ballaaran oo leh Flash Flash
Kaamirada hore: 24 MP
Xiriirinta: 4G / LTE, Bluetooth 5, WiFi 802.11a / b / g / n / ac / ad, NFC, 3.5mm jack, USB-C
kuwa kale: Dareemaha sawirka faraha
Battery: 6000 mAh oo si dhakhso leh loogu soo oogayo 30W.
Cabirrada: 170.99 x 77.6 x 9.48 mm.
Miisaanka: Gram 240
Nidaamka Howlgalka: Qalab Android Configurable ah
Sidaad u aragto, waxaa loo soo bandhigaa inay tahay taleefan awood leh, oo leh naqshad wanaagsan, qeexitaanno wanaagsan oo la kulmaya wax kasta oo isticmaaleyaashu ka raadsadaan taleefanka ciyaarta. Markaa waa wax aan caadi ahayn in badan oo ka mid ah ay arkaan taleefankan 'ASUS ROG Phone 2' sida ikhtiyaarka ugu fiican ee aan maanta iibsan karno qaybtan suuqa. Waxay si buuxda u fulineysaa waana taas sababta rajada ka hor intaan la bilaabin suuqa ugu badnaan.
Qiimaha iyo bilowga
Kuwa xiiseynaya taleefanka horay ayey ugu sii haysan karaan si rasmi ah bogga shirkadda. Waxaa horeyba looga heli karaa dukaankaaga rasmiga ah ee rasmiga ah, link this. Markii la bilaabay waxay tahay inaan sugno dhowr toddobaad weli, maaddaama ASUS ROG Phone 2 aan la fileynin waxay bilaabaysaa Yurub ilaa Sebtember 20. Marka wax yar ayaynu sugaynaa, ugu yaraanna waxaan taariikh rasmi ah ka haysannaa shirkadda. Waxaa lagu sii daayaa qaab isku mid ah suuqa, sida aad arki karto.
ASUS ROG Telefoonka 2 wuxuu la yimid qiimo dhan 899 euro dukaamada. Waxay ahayd qiimo durba la filan karay, markaa yaanay layaab ku noqonin qof kasta oo arrintan la xiriira. Websaydhadeeda ka sokow, waxaa laga bilaabi doonaa dukaamada sidoo kale. Waa nooca kaliya ee aan hadda ka iibsan karno taleefankan cusub ee ciyaaraha ah ee astaanta ah, in kasta oo la xaqiijiyay in dhowaan ay jiri doonto daabacaad gaar ah, oo sidoo kale si rasmi ah looga iibsan karo Yurub.
Noocaan taleefanka waxaa lagu magacaabi doonaa Ultimate Edition, waxaa la filayaa dhamaadka sanadkan, inkasta oo aysan lahayn taariikh gaar ah oo lagu sii daynayo xilligan. Waxay la imaan laheyd 1 TB oo kiiskan ah waxayna na siin doontaa si deg deg ah Bisadaha 20 4G LTE soo degsashada kiiskan, illaa 2Gbps. Marka waxay noqon doontaa nooc ka xoog badan kan asalka ah, in kasta oo aan waxba laga ogayn in la yidhi bilowga illaa hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ASUS ROG Telefoonka 2 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Yurub
Android 10 wuxuu keenaa shaashadda guriga ee qaar ka mid ah Pixels inuu barafoobo